Etu Aga-Esi Amata Ma ọ Bụrụ Na Onye Nnọchi Anya ọpụpụ Na-Adị Njọ - Doherty Fultz Immigration
Onye edemede: Cassandra Fultz (Ijikwa Onye Mmekọ nke Doherty Fultz Immigration)
Otu n’ime nsogbu kachasị na ụwa nke ọpụpụ nke Canada bụ ndị ndụmọdụ aghụghọ, ndị a makwaara dị ka “ndị mmụọ” ndụmọdụ. Ọfịs anyị ahụla ndị ndị adịgboroja adịgboroja na-egwu wayo na-egwu wayo:
adịgboroja LMIAs na ikikere ọrụ adịgboroja erere ndị na-achọ ya $ 100s ma ọ bụ ọbụna $ 1000s nke dollar
Ndị anamachọ ihe na-enye akwụkwọ ndị furu efu ma ọ bụ bibie
Ndị tinyere akwụkwọ maka ịkwụ ụgwọ nnochite anya, mana ha enweghị ike ịkpọtụrụ “onye nnọchi anya” ha ọzọ
Gbanyụọ ndị ndụmọdụ nyere ndụmọdụ na-ezighi ezi ma ọ bụ nyefee ozi ezighi ezi na-eme ka amachibido onye na-achọ ọrụ na Canada
Adigboroja Facebook na profaịlụ mgbasa ozi ndị ọzọ e guzobere n’aha ezigbo ndị ọkachamara
Ihe ndị a bụ nsogbu ole na ole ndị mmadụ chetarala ma mee ka anyị mata.
Ndị a bụ ụzọ kachasị mma iji gosi ma ọ bụrụ na onye nnọchi anya ya bụ adigboroja:
Ọ bụrụ na mmadụ akpọọ onwe ha “onye ndụmọdụ mbugharị,” “onye nnọchi anya,” “onye na-ahụ maka mbata na ọpụpụ,” “onye na-ahụ maka mbata na ọpụpụ,” “onye ndụmọdụ,” “ọkachamara,” “onye ndụmọdụ,” ma ọ bụ “onye ọrụ mbata na ọpụpụ” ọ ga-abụ na ha bụ adigboroja.
Mba dị iche iche (dịka Australia) na-eji okwu dị iche iche maka ndị ọrụ iwu ha, mana na Canada, ndị na-ahụ maka mbugharị, ndị ọrụ mbata na ọpụpụ, ndị ọrụ mbata na ọpụpụ, ndị ndụmọdụ, ndị ọkachamara na ndị ndụmọdụ adịghị adị. Ndị a bụ okwu nke ndị mmadụ na-enweghị ikikere iji na-eme ọpụpụ nke Canada na-eji ele anya karịa nke ọma mgbe onye ahịa nwere ike ghara ịma ihe dị iche.
Na Canada naanị ndị na-ahụ maka ndị na-ahụ maka ndị ọrụ mbugharị nke Canada (REGULATED CANADIAN IMMIGRATION CONSULTANTS) (RCICs), ndị Canada na-ahụ maka ndị na-akwabata (immigration LAWYERS) na Canada, na (na Quebec) ndị otu Chambres de Notaires du Quebec nwere ike ịnọchite anya ndị mmadụ na ngwa mbata na ọpụpụ maka ego. Ndị Canada na-enyocha iwu (Canadian Paralegals) nwere ike ịnọchite anya nzukọ ndị mbata na ọpụpụ na ndị gbara ọsọ ndụ, mana ha enweghị ike ịnọchite anya na ngwa mbata na ọpụpụ.
AHA ADIGBOROJA ma ọ bụ EZIGBO?
Immigrashọn / Onye na-ahụ maka Mbugharị (Immigration/Migration AGENT) Adịgboroja
Onye na-ahụ maka mbugharị mbugharị (MIGRATION Consultant) Adịgboroja
Immigrashọn / Mbugharị Onye na-eme njem (Immigration/Migration PRACTITIONER) Adịgboroja
Onye nyemaka mbata na ọpụpụ / Mbugharị(Immigration /Migration PRACTITIONER) Adịgboroja
Immigrashọn / Mbugharị ọkachamara(Immigration/ Migration SPECIALIST) Adịgboroja
Immigration / Mbugharị Ndụmọdụ(Immigration/Migration COUNSELOR) Adịgboroja
Immigration / Mbugharị ọkachamara(Immigration /Migration PROFESSIONAL) Adịgboroja
Onye na-ahụ maka Immigrashọn nke Kanada na-achịkwa (RCIC) Ezigbo
Onye ọka iwu ọpụpụ na Canada (nzere LLB, onye otu ndị otu Canada Bar Association) Ezigbo
Otu – Chambres de Notaires du Quebec Ezigbo
Paralegel nke Canada E NWEGHI IKE ịnọchite anya na Ngwa E NWERE IKE ịnọchite anya na IRB Nụrụnụ
Onye ọ bụla na-akpọ onwe ya ihe ọ bụla ọzọ na-abụghị Onye Ọchịchị Na-ahụ Maka Mbata na Ọpụpụ Canada ma ọ bụ onye ọka iwu Canada bụ ihe adịgboroja. Ndị anyị nwere ikikere iji mụta ọpụpụ nke Canada gafere ọzụzụ siri ike ma dị oke ọnụ – anyị nwere obi ụtọ igosi gị nzere anyị.
2. I nwere ike ịchọpụta nke ọma ma ọ bụrụ na mmadụ bụ onye otu ICCRC ma ọ bụ Canadian Bar Association yana nyocha dị mfe na weebụsaịtị ndị na-enye ikikere.Na weebụsaịtị ICCRC, ị nwere ike ịchọ ndị ọkachamara nwere ikikere site na iji aha mbụ ha, aha ikpeazụ, ebe ọrụ, ma ọ bụ nọmba ndebanye aha – lee foto dị n’okpuru.
I nwedịrị ike ịlele ma ọ bụrụ na onye ndụmọdụ ma ọ bụ onye ọka iwu enweburu nsogbu ma ọ bụ nwee usoro ịdọ aka ná ntị ọ bụla megide ha. https://iccrc-crcic.ca/find-a-professional/
Ihe ị ga – eme iji lelee ma ọ bụrụ na onye ndụmọdụ ma ọ bụ onye ọka iwu nwere ikikere bụ ụdị ọ bụla nke ozi ha.
Ọ bụrụ na ha apụtaghị, mgbe ahụ i nwere azịza gị. Ọ bụrụ na onye akpọrọ “ọkachamara” achọghị ịnye gị nọmba Iwu ha ma ọ bụ nọmba ICCRC, yabụ na ọ bụ ya kpatara nke a.
3. Naanị ịnara ego ma ọ bụrụ na akwadoro ngwa ahụ – hoo haaA machibidoro ndị na-ahụ maka Immigrashọn maka ndị ọrụ Immigrashọn nke Canada Regulatory Council (ICCRC) iwu na ịgba ụgwọ maka ihe mgbakwasị ụkwụ.
Nke a pụtara na amachibidoro anyị ịkwụ ụgwọ ndị ahịa naanị ma ọ bụrụ na akwadoro ngwa. RCIC niile ga-agbaso Usoro ICCRC nke Omume Ọkachamara, nke na-anaghị ekwe ka ịgba ụgwọ. Ọ bụrụ na onye na-anọchi anya onwe ya dị ka onye ndụmọdụ ga-ewe naanị ụgwọ ọrụ ọkachamara ma ọ bụrụ na anabatara ngwa gị, ha na-emebi iwu ICCRC ma ghara ịkwụwa aka ọtọ, ma ọ bụ na ha abụghị ndị otu ICCRC ma ọlị.
4. Nsogbu ịbịakwute onye nnọchi anya gị mgbe ị kwụrụ ụgwọEkwesịrị ka onye nnọchianya gị nọrọ ya iji zaa ajụjụ gị ma kwukọrịta gbasara akụkụ niile nke usoro ntinye akwụkwọ ahụ.
Ikwesiri inwe ozi niile gbasara ha tupu ị banye nkwekọrịta nkwekọrịta ma bido usoro a, gụnyere: – Onye nnọchiteanya zuru aha- Adreesị ụlọ ọrụ- Ozi kọntaktị gụnyere nọmba ekwentị na email- ICCRC ma ọ bụ Nọmba Ndebanye aha Society N’ezie, oge na-adịghị anya onye nnọchi anya gị ga-aza ozi ịntanetị na oku ekwentị kwesịrị ịtụle tupu ị kwụọ ha ụgwọ (n’ime oge 24-48 bụ oge kwesịrị ekwesị). Ọ dịkwa njọ na onye nnọchi anya gị nwere ike ma ọ bụ ghara inye nọmba ekwentị iji ruo ha aka, ọ bụrụhaala na ha nyere gị nọmba ekwentị ọfịs. N’agbanyeghị, ikwesighi ịnọ n’ọchịchịrị banyere:- onye bụ onye nnọchi anya gị,- otu esi akpọtụrụ ha,- kedu usoro ntinye akwụkwọ ga-adị.Ihe ị ga – eme iji lelee ma ọ bụrụ na onye ndụmọdụ ma ọ bụ onye ọka iwu nwere ikikere bụ ụdị ọ bụla nke ozi ha. Ọ bụrụ na ha apụtaghị, mgbe ahụ i nwere azịza gị.
5. Usoro ịkwụ ụgwọ ma ọ bụ ọrụ enyere adịghị edo anya na nkwekọrịta ahụNdi otu ndi nlere na ndi nlegharị anya nke ndi Canada na ndi ọkaiwu nke ndi Canada ga abanye na ndi oru ha ka ha nye ha oru ha.
Ọ bụ iwu na nkwekọrịta a gụnyere ihe dịka: – Onye nnochite anya kọntaktị- Ndepụta nke ọrụ a ga-enye- Tydị na ego ole a ga-akwụ- Mgbe ego ịkwụ ụgwọ ruru- Ihe ị ga – eme ma ọ bụrụ na esemokwu gị na onye nnọchi anya gị nwere- Otu esi akpọtụrụ ICCRC ma ọ bụ Society Society ma ọ bụrụ na ịchọrọ ịme mkpesa megide onye nnọchi anya gịNdị nkwekọrịta a (nke a na-akpọ nkwekọrịta njigide) GA-ebinye maka onye ọkachamara ọpụpụ ọkachamara ma ọ bụ onye ọka iwu ka ọ nọchite anya gị. Ọ bụrụ na-agaghị na-jụrụ ịbanye a nkwekọrịta, mgbe ahụ onye a bụ ma ọ bụghị a ikikere ọkachamara ma ọ bụ na ha na-emebi iwu nke na-enye ha ohere ha nwere ikike eme mbata na ọpụpụ. Ihe ndị a edere e baa bụ ole n’ ole n’ime ihe ịrịba ama na onye na-ere ọrụ mbata na ọpụpụ abụghị onye nyere ikike mbata na ọpụpụ ndụmọdụ ma
ọ bụ ọkàiwu, nke pụtara: –
ọ dịbeghị mgbe a zụrụ ha ka ha rụọ ọrụ nke ọma na akwụkwọ mbata na ọpụpụ nke Canada;-
enweghi uzo ma oburu na onye a zuru ego gi ma obu mebie ohere gi nke icho oru mbata na CanadaỌ bụrụ n ’ị na-enyo na onye na-ahụ maka ndụmọdụ ma ọ bụ onye ọka iwu bụ adigboroja, ị nwere ike kọọrọ ha ozugbo na Royal Canadian Mounted Police Canadian Canadian Anti-Fraud Center na 1-888-495-8501 – ha KỌỌRỌ na mpụga mbata na ọpụpụ dịka anyị na-eme.
Edemede nke Chigozie Enwereuzo tụgharịrị. Should you require translation between the Igbo and English languages, please contact Chigozie Enwereuzo who graciously translated this page: bolderpeakecanada@gmail.com
Please note that all translations are done in good faith by our trusted network of translators. However, Doherty Fultz Immigration Inc. is unable to take any responsibility for the accuracy of any translation or the content therein.